विवाहको रात सेक्स भएन तर अन्य धेरै कुरा भए - Social Video Khabar
ब्राइटन (बेलायत) मा जुन दिन मैले विवाह गरें, त्यतिबेला आकाश निकै खुलेको थियो । त्यहाँ म आफ्नो ल्याब्राडोर कुकुर एलासँगै थिएँ । बेलायतमा मेरो यो विवाह वैध छैन । तर मेरा लागि उक्त समारोह निकै विशेष थियो । म ३८ वर्ष पुगिसकेकी छु र मैले जीवनमा दुःखद सम्बन्धको अनुभव बटुलेकी छु ।
मेरो अन्तिम पार्टनरलाई म अत्यधिक माया गर्दथें । म उनको प्रेममा बगेकी थिएँ तर उनले निकै चाँडै सम्बन्ध तोडिदिए । उक्त प्रेमको उमेर १८ महिना थियो । उनले मेरो साथीसँग मिलेर मलाई धोका दिए । उक्त धोका मेरा लागि सामान्य थिएन । यसले मलाई भयानक पीडा दियो । म गहिरो शोकमा डुबेकी थिएँ, मेरा आँसु रोकिएका थिएनन् । त्यतिबेला म आफैंसँग प्रश्न गर्दथें ।
ब्रेक अप पछि- त्योभन्दा अघि पनि मैले धोका पाइसकेको थिएँ र मलाई त्यसको डर थियो । मलाई तत्काल लाग्न थाल्यो कि एक पटक पुनः गलत व्यक्तिसँग प्रेम गरिरहेकी छु । मैले कहिले पनि युवतीजस्तो उक्त विशेष दिनका लागि कुनै सपना देखेकी थिइनँ । यद्यपी, ब्रेकअप पछि मैले आफूभित्र आफैंलाई खोज्न सुरु गरें ।
आफैंभित्र प्रेमको खोजी गर्नुजस्तो रोमान्टिक अरु के हुनसक्ला भन्ने बारे सोच्न थालें । कुनै अन्य राम्रा–नराम्रा व्यक्तिको साथ न त मलाई चाहिन्छ न नै कसैको लगातार खोजी गरिरहन सक्छु । सायद म जसको खोजीमा थिएँ, त्यो म नै हुँ । विवाह समारोहको आयोजना निकै सजिलो थियो ।
उक्त आयोजना मेरो खुसीको लागि मात्र थियो । मैले लण्डनबाट विन्टेज ड्रेस खरिद गरेकी थिएँ । विवाहका लागि मैले ब्राइटन बीच बुक गरेकी थिएँ । मैले विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थको व्यवस्था गरेकी थिएँ । साथै विवाहको पारम्परिक मूल्यमान्यतालाई पनि अपनाकी थिएँ ता कि आफैंप्रति प्रतिबद्ध हुन सकूँ । मैले आफ्ना निराशासँग जुघ्ने कसम खाएँ । मैले आफ्ना असफलता स्विकार गरें । मैले राम्रो र नराम्रो दिनमा आफ्नो सबैभन्दा राम्रो साथी बन्ने कसम खाएँ । साथै, मैले सफलतालाई उत्सवको रुपमा मनाउने संकल्प पनि गरें ।
कसरी लिइन् संकल्प ?
मैले विवाहको क्रममा संकल्प लिँदै भने, ‘म गर्नेछु ।’ जब म संकल्प लिइरहेकी थिएँ तब समारोहमा आएका अतिथीबिच एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो । विवाहको समारोह निकै भव्य थियो । मैले समारोहमा आएका प्रियजनतर्फ हेर्दा सबैले मसँग खुसी बाँडिरहेको देखें । पूरा माहोल मेरो निर्णयप्रति आश्वस्त हुने भाव थियो । मैले सबैलाई डान्समा समावेश हुनका लागि आग्रह गरेकी थिएँ । विवाहमा उपस्थित सबैजनाले मज्जाले डान्स गर्नुभएको थियो । मेरी साथी क्याथले आफ्ना सन्तानसँग नाचिन् । थुप्रै मानिसहरुले अहिलेसम्म जति विवाह समारोहमा सरिक भए तीमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट विवाह अनुभव भएको मलाई बताए ।
मेरा बुवाले उक्त विवाहलाई गम्भीरताका साथ लिए । उनी डराउँदै आफ्नो टाई सिधा गरिरहेका थिए । उनले मलाई पाखुरामा समाते र मलाई नै सुम्पिए । मलाई थाहा छ कि बुवालाई म कति माया गर्दछु । उनले सधैं मलाई साथ दिए । जे पनि मैले चाहें त्यसको समर्थनमा उनी उत्रिए । यति खुल्ला दिमाग भएका व्यक्ति मैले अहिलेसम्म देखेकी छैन ।
आफैंसँग विवाह गरेपछि मैले आफ्नो साथ र प्रशंसा पाउन थालें । मैले आफूलाई धेरै समय दिन थालें । यो जटिल पटक्कै छैन । आफूलाई प्रेम गर्न निकै सजिलो छ । म सधैं विवाहमा गरिएको आफ्नो संकल्पलाई याद गर्दछु र त्यसबारे प्रतिबद्ध छु । मेरो वेडिङ नाइट सेक्सी थिएन । वेडिङ नाइटमा सेक्स पनि थिएन वा रोमान्टिक थिएन भन्न सकिन्छ । तर मैले रातभरी ती मानिसहरुसँग नाचे जसलाई म प्रेम गर्छु । जब बिहान भयो तब म विवाहित महिला भइसकेकी थिएँ र मलाई निकै राम्रो महसुस भइरहेको थियो ।
थुप्रै मानिसहरु मलाई एक ‘निराश महिलावादी’ भन्छन् । मैले आफूलाई कुनै व्यक्तिसँग रोमान्स गर्नका लागि अलग्गाएको छैन । नन बन्नका लागि मैले कुनै हस्ताक्षर गरेकी पनि छैन । यदि जीवनमा कसैको साथ मिल्छ भने त्यो उत्कृष्ट हुनेछ । बीबीसी /सोफी ट्यानर । रातोपाटीबाट साभार ।
Prevअरुसंग सल्केको भन्दै श्रीमानले हालिदिए श्रीमतीको योनीमा खुर्सानीको धुलो…
Nextविवाहको पहिलो रात यौन सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने ? यस्ता छन कारणहरु
मुखमा तास कोचेर आफ्नै बहिनीको यसरी बलात्कार”
अर्चना पनेरु को डरलाग्दो FACEBOOK लाईभ भिडियो 18+ ले मात्रै हेर्नुहोला